National Power News:: पति- पत्नीमा किन हुन्छ झगडा, के छ समधान र ? National Power News:: पति- पत्नीमा किन हुन्छ झगडा, के छ समधान र ?
पति- पत्नीमा किन हुन्छ झगडा, के छ समधान र ?
संभवत धेरैजसो पति-पत्नीबीच मनमुटाव भइरहन्छ । ठाकठुक परिरहन्छ । कहिले को नबोल्ने, कहिले खाना नखाने । अक्सर दम्पतीबीच यस्तो नोंकझोक चलिरहन्छ । पति-पत्नीबीच किन झगडा हुन्छ रु किन ठाकठुक परिरहन्छ रु
हरेक मान्छेको आ-आफ्नै स्वभाव हुन्छ । आफ्नै प्रवृत्ति हुन्छ । बोली-व्यवहार भिन्न हुन्छ । इच्छा फरक हुन्छ । सोंच-चिन्तन फरक हुनसक्छ ।यसरी फरक-फरक सोंच, प्रवृत्ति, इच्छा भएका दुई व्यक्ति जब एक ठाउँमा उभिन्छन्, उनीहरुबीच मतभिन्नता हुनु स्वभाविक हो । आपसमा कुराहरु बाझिन सक्छ । इच्छाहरु बाझिन सक्छ । एउटै कुरालाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण बन्न सक्छ ।
विभिन्न अध्ययनहरुले पनि के देखाएको छ भने, पति(पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ । मनमुटाव नहुने, झै(झगडा नगर्ने, आपसमा गुनासो नभएका आदर्श दम्पति अपवाद मात्र हुनसक्छन् ।
कहिले काहिँ झैझगडा हुनु सामान्य हो । मनमुटाव हुनु, भनाभन हुनुलाई पनि अन्याथा लिन सकिदैन । यद्यपी यस्तो झैझगडा दिनदिनै हुने र त्यसको कारण उनीहरुको घरासयी वातावरण नै बिथोलिन थाल्यो भने, त्यसले गंभिर रुप लिनसक्छ । पति-पत्नीबीच मात्र होइन, यसले परिवारलाई समेत गम्भीर असर पार्छ । खासगरी उनीहरुका बच्चालाई यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । आमाबुबाबीच दिनदिनै झगडा भएमा बच्चाहरुले त्यसको मानसिक पीडा झेल्नुपर्छ ।
पति पत्नीमा व्यवहारिक कारणले वा घर-व्यवहारको कारणले मात्र झगडा हुँदैन । यसमा उनीहरुको प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार हुन्छ । खासमा पति पत्नी झै-झगडा गरिरहनुमा उनीहरुको अहंम्, दम्भ वा एकअर्कासँग नझुक्ने, नहार्ने प्रवृत्ति पनि मूख्य हो । अक्सर पति वा पत्नी एकअर्कासँग झुक्न चाहँदैनन । कुनैपनि कुरामा विवाद भएमा उनीहरु दुबै पछि हट्न चाहदैनन् । दुबैलाई आफ्नो कुरा सही लाग्छ । आफ्नो अडान नछोड्दा पनि दम्पतीबीच झगडा हुन्छ ।
पति-पत्नीबीच आपसी मतभेद हुनु, मनमुटाव हुनु, ठाकठुक पर्नुलाई त्यती गंभिरतापूर्वक लिन आवश्यक छैन, जसले मनमा तुष रोपोस् । वा वदलाको भावना पैदा गरोस् । सामान्य झै-झगडा हुन्छ । त्यसले एकअर्कालाई बुझ्न, एकअर्काको चाहाना, भावना, इच्छा, आकंक्षा, प्रवृत्ति बुझ्न सघाउँछ । र, बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ । पार्टनरको इच्छा, प्रवृत्ति, स्वभाव बुझिएमा त्यही अनुसार व्यवहार गर्न सकिन्छ ।
पार्टनरलाई वदला लिने भावनाले हेर्ने होइन । बरु आपसी कमजोरीहरु सुधार गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । गल्ती दुबैबाट भएको हुनसक्छ । कमजोरी दुबैमा हुनसक्छ । यस्ता गल्ती, कमजोरीलाई एकअर्काले स्विकार्ने र सुधार्ने गर्नुपर्छ । माफी दिनु नै दाम्पत्य सुखको अर्को कडी हो । पति वा पत्नीले एकअर्काको कमजोरी स्विकार्ने र माफी दिने गर्‍यो भने उनीहरुमा यस्ता मनमुटाव हुने क्रम पातलिन्छ । किनभने माफीले पार्टनरको मन पग्लिन्छ । प्रेमभाव पैदा हुन्छ ।